“ABO”n , MAQAA MITII !!! KAAYYOO UMMTA OROMOOTI !!! | OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
December 23, 2016 OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA.ORG	Leave a comment
ABO”n , MAQAA MITII !!! KAAYYOO UMMTA OROMOOTI !!!
SEENAA Y. G(2005) Kutaa 1ffaa
Qabsoon Oromoo wayita finiinu , diinni rifatee waan qabuu fi gadhiisu dhabuun waan jiraati. Kanarra wanni nama raajuu, Diyaaspooraan maaliif akka burjaaja’uudha . haalli akkasii kun, yeroo tokko fi lama qofaa miti kan mul’atee. Yeroo hedduudha. Seenaa Qabsoo Oromoo keessatti badiin irra jireessa mul’achaa ka jiru, Oromotuma sababaa siyaasaan Biyyaa baqataniinii jechuu dandeenya. Rakkoon kun ammoo, qabsoon kun akka hirkifatuuf shoora mataa isaa taphateera. Ani yeroo tokko tokko taa’ee yennaan yaadu, adeemsa qabsoo kana gara alaa irraa buqqisanii Biyya keessatti deebisuu irratti osoo hojjatamee bu’aa ol aanaatu argamaa jedheen yaadaa ture. kun gama tokkon ijaan argaa ka jirru waan ta’eef jajjabeeffamuu qaba. Diyaaspooraan qabsoon wayita finiintu jabaachuu irra, maaliif akka hammacamaa jiraatu naa hin galu. Beekumsii fi dandeettiin wal balleessuu fi walirratti hinaaffuuf wayita ooluu, isa baadiyyaatii garaa qulqulluu mirga isaaf falmatuuf filachuun haqummaadha.
Wayyaaneen Biyya keessatti nama itti jabaatee fi hawaasi waliin jira jettee itti qiyyaafattee ni ajjeefti. Isa yeroo keessa na miidha jettu ammoo Biyyaa baaftii. Isa gidduu galeessummaan yaadduu ykn gara lamaanitti na miidhaa jettuu hidhaa keessa waggaa dheeraa keessi. Ajjeesuu fi hidhuu dhiifnee, yeroo danuu warra Biyya alaatti godaansiftuu irratti gaaffii maaliif ? jedhuun qaba ture. har’aa garuu hubadheen jira. Biyya alaa dhaquun lammiilee hedduu haalaan miidha. Keessattu karaa sabummaa isaanii waan jiru keessatti fixachiisa. Kana jechuun hunda ilaallataa miti. hammacamaa biyyaa baaftee, diyaaspooraa akka hammacuu gootii. Goota Bilisuummaa akkamii baaftee miciraan keessatti fixxee kachachaltuu taasiftii. Waan ajaa’iibaati. beektoota keenyaa katabbiima qofaan hanbifti. Qaroo keenya ofittummaan bakka salphinaa dhaabdii. Goota sabaaf ta’uu isa jedhamuu onnee keessatti bukeessitii. Biyyi alaa waan raajii nu argisiiftee dhugaa waaqaa. Yaada kana irratti gara fuula duraatti itti deebina.
ABOn MAQAA MITI !!! …….ABOn maqaa ilma ykn intala dhalfataniif mggaasan mitii. ABOn kaayyoodha. Kaayyoo Ummata Oromoo !!! Ummati Oromoo ABO malee yennaa jedhuu, Kaayyoo san gaafata malee, ABO isa Tishartii irratti rarraafatanii itti daldalan Sanaa mitii. Qabsaa’oonni qabsoo kana hundeessan dabalatee, Maqaa saamichaa kana keessatti adda durummaan hiriiruu arguun keenya nama gaddisiisa. Keessattu dhalooti har’aa !!! hegaree ofii yoo hin beekiin dhala hin godhatiin jedha Oromoon. Dubbiin kiyya har’aa, qabsaa’oota ykn hundeessitoota Qabsoo gaggeeffamaa jiru cichanii falmaa jiran hin ilaallatu. Kaayyoo inni guddaa dagatamee, Maqaa saamuuf arreeduun nama raaja. Qaaniidha. Dhaaboonni siyaasaa Oromoo 100 ta’uu danda’an. Kun mirga. Ummata kiyyaaf furmaata jedhanii yoo itti amanan. Kaayyoo Ummataa Maqaan qixxeessanii waan waraqaa irratti katabamtuun wal mulquuf yaaluun badiidha. Qeerroo Biyya keessaa falmaa hadhaawaa gaggeessaa jiru irratti, saamicha dhiiga yaaluun hedduu hedduu dogoggora. ABOn nu haa Bulchuu osoo jedhanii, ABOn kana dura hin turree ykn nuudhaa !! ittiin jechuun nagummaafii ? lubbuu isaa qaalii gabbaraa jiru gara cinaatti dhiisanii , ABOn nuyi jechuuf arreeduun beekumsamoo wallaalummaa ? osoo ta’ee iyyu, qabsoo isaan wareegama ulfaataa itti baasaniif gatii odoo itti hin laatiin, ABO isin jettan nuudhaa jedhamee, kan isaan bobbaasee irraa saamuuf yaaluun , maalummaa keenya ibsa ?
Waggoota dheeraaf, dhaabbileen siyaasaa Oromoo Maqaa saamuunis haa ta’uu, maqaa biraa moggaafatanii diina durs, wal afoo illee wayita dhaabbataa turan, hagas maraa natti hin dhaga’amu ture. (badii ijaan osoo arganii kanneen badii biraa hojjatan deeggaruuf miti,) amantaan kiyya, Qabsoon Oromoo adeemsa kana hundaa keessa dabree wayitti ba’aa kan jedhu ture.qormaata keessa dabruu qaba. wanni waggaa 2 dura ture har’a hin jiru. adeemsa gaarii irra ture. hundumtuu tokkummaatti luucca’aa fi hubachaa dhufee ture. Kun adeemsadha. Waan galgala tokkotti keessaa baanu miti. waan jiru hundaa dhaloota itti aanu irratti bu’aa isaa argina malee, Diyaaspooraa akka bishaan gabatee waliin dhahaamuu kanaa miti. ABO QC ammaa kun badii ulfaataa hojjatan. Adeemsi kun gonkumaa Ummata Biyya keessaa dhumaa jiruuf furmaata hin ta’uu. Diyaaspooraa galgala tokkof walitti sirbuuf ta’uu mala. kaayyoo ABO duubaan jiruuf garuu fala hin taatu. Keessattu beekumsaa fi dandeettii akkasumas muuxannoo qabsoo haa dhiifnuuti, Umuriin warra QC itti jiran kun , Maqaa walirraa saamuuf kan nama dhaabuudhaa ???? murannoo isaa qabaannaan maaliif maqaa biraa moggaafatanii , Ummata biratti fudhatama godhatanii mul’achuuf hin yaallee ???araara jedhamee sadarkaa amma san adeemamee, isa boodas hiriyyoonni isaanii karaa haqaa irra bu’anii isaan alatti hafanii baatiilee dheeraa booda irriibaa ka’uun maaliif barbaachise ? gadi fageessanii yaadu osoo ta’ee rakkoon nu qabee jiru, rakkoo dhaaba baayyifachuu miti. fakkeenya ta’anii bu’aa ummataa irratti hiriiruu dadhabuu malee.kan bubbulee irraa kan arginee ijoollee komannaaree ? xiinxaltoota qeeqnaaree ? anisoo abbaan qabaa jedhuwoo..
Inumaa yeroo jalqabaaf gaaffii jabduu tokko sammuu keessatti na dhuftee ? Maqaa saamuun, Ummata gabrummaan waadamaa jiruuf furmaata moo, warra maqichaan ba’uu barbaadaniif furmaata ? ka jettu . ilaalaa ,,,,bilchinaa fi yaadaa bal’achuu dhabuurraa malee, Umurii keenya itti gubnee isa jedhu fudhachiisuuf karaan isaa akkas hin turre. ABO malee maqaa biraa hin barbaannu warri jedhan, Ummatatu waan jaalatuuf moo, Kaayyicha irraatii ? moo Maqaa dhaabaatti fudhatamee, Dhaabinii ABO jedhanu nuyii ,,, jechuudhaa ? kaleessa dhaaba kana irraa wayita ba’aan , nu hojjachiisuu didanii ture. nu hojjachiisuu didaniif fallii, bakka itti hojjachuu danda’an bilisaan dhaabbachuudhaa. ABO ummatatu jaallataa jennee maqaa kana saamuuf arreedina taanaan hedduu nama qaanessa. Ummata illee tuffachuudha. Ummati waggaa 150 ol gabroomee, abbaan fedhee ABO jedhee waan dhufeef jilbeenfata jedhanii yaaduun dogoggora guddaadha. Ummati Kaayyoo qaba . Kaayyoo kana kan raawwachiisuuf eenyu akka ta’ee ni beeka.
Wayyaaneen ABO meeqa dhaabdee Biyyatti akka deebi’aniif yaaliin goote lakkoofsa hin qabu. Hoggana jiru balleessuuf hoggana biraa ijaaraa fi deebistee diigaa jiraaachuu ifatti argaa jirra. Maarree ABO nuuti saamuuf fiignu kun, gocha diinaa irraa addummaan maalii qaba? Qabsoon Oromoo Tifoozoo Diyaaspooraan hin kachachaltu. Hundeen qabsoo keenyaa sadarkaa nama amansiisuu irra jira. Biyya keessa. Sirbi Diyaaspooraa deeggarsa irra hin taru. Diyaaspooraa waan meeqaan wacabbaruun harka rukuchiifachuun, Ummataan filamuu mitii. Beekumsaa fi muuxannoon yoo diddee Ammuma Umurii keenyaa haa yaadinuu. Muuxannoo qabsoo waggaa 40 olii qabnaa jechaa , sagantaa waggaa 5 nu tarkaanfachiisuu tilmaamuu dhabuun keenya nama gaddisisa. Faranjoonni Diyaaspooraan keenya irra wajagan sagantaa Ummataa fi Biyyaa yennaa baafatan , inni xiqqaa Waggaa 20 booda kana goonaa kanaaf amma kun eegaluu qabaa jedhu. Inni itti aanu waggaa 30-40 ti . inni sadaffaa waggaa 50.
Dhaabbileen siyaasaa fi dhaabbileen adda addaa Maqaa Oromoon ol ka’uu yaalanii fi deebi’anii dhaaman karooraa fi sagantaa kana hin qabaniifi. Warri Maqaa saamuuf arreedaniis kanuma keessa jiru. warri kanaan duras 5,5niin gurmaa’anii maqaa kana saamuuf yaalan baatiileef illee osoo hin dhaabbanee kan deebi’anii kufaniif, yaada isaaniitu lafatti dhihoo jira. Akitivistoonni akka haala qilleensaa Intarneeta irraa iyya kuukkuu iyyanii kan hin daballeef, iyyuuf illee humna qaban waan hin beekneefi ? Faranjoonni wanni nutti qoosan kanarratti. Wal jigsuuf rafanii hin bulan . waggaa tokko faa’aa walirrratti hojjatu. Waan deemaniif sanaaf garuu bunarratti haasa’uu irra hin dabran. Kana wayita godhan garu waan dagatan kaayyoo guddaa tokkotu jira. Dhiiga ijoollee keenyaa irratti abbaa ta’uuf Samicha maqaa gaggeessaa jiraachuu isaanii !!!!!!!!!!!Wayyaaneen Faranjoota irratti akkas jettee nu hamattee jirti. ABOn namoota muraasa malee, kan Ummata Oromoo bakka bu’uu miti. kaayyoon isaas, kan ummataa miti. kan namoota muraasaati. Biyya Bulchuu itti laachuun waan deemaniif milkeessuudhaa. Guyyaa tokkotti Biyya kirstaanaa kana diigu. Isaan islaamatti heddummaatu. Kanarra ammoo walii isaanii wal fixan. Wal hin ta’an . saba biraa irratti duuluu kkf jettee jirti. Egaa maqaa xureessii wayyaanee kana dhugeessaa kan jiru, warra qabsoo cichanii itti jiran moo, Qeerroo Goota Oromoo moo, Warra Maqaa saamaa jiruu moo, Aktivistoota baranee kanneenii ?
KUTAA 2FFAA keessatti itti deebina .
Previous PostVision Ethiopia vs. Vision Oromia: Good for Who?Next Post“ABO”n , MAQAA MITII !!! KAAYYOO UMMTA OROMOOTI !!!